Indlu yaseFama yaBucala nje i-1/2 yeemayile ukusuka kwisitalato esikhulu
Indlu yefama esandula ukulungiswa 1,500 sq. ft. Ifama ekwisiqingatha semayile ukusuka kwisitalato esikhulu saseFerndale! Hlala esangweni likaFrancis Creek Ranch kwindlu yakho yabucala. Thatha uhambo olufutshane, olunembonakalo entle ukuya kwiLali yeVictorian yaseFerndale ukuze utye okanye uyokuthenga okanye ube neendwendwe ezikundwendwelayo kwifama-kukho indawo yokupaka eninzi! Ndwendwela neebhokhwe, iinkomo, kunye namahashe ahlala efama-okanye ukonwabele uhambo oluhle lokunyuka kwenye yeendlela ezikwifama!
Igumbi lokulala elikhulu linamagumbi amabini agcweleyo, igumbi lokuhlambela labucala eligcwele ibhafu ye-jacuzzi kunye neshawari, kunye neentambo zombane zokutshaja kumacala omabini ebhedi. Ikhitshi ine-oveni enobungakanani obugcweleyo kunye noluhlu, umenzi wekofu weKeurig, imicrowave enkulu, isitya sokuhlamba izitya, kunye nefriji. Sihlala sibeka iibhotile ezimbalwa zewayini, iibhiya ezimbalwa ezahlukeneyo, ikofu yeKeurig, iswekile, ikhrimu, kunye nezinye izinto ezisisiseko zokuhlala. Igumbi lokuhlambela lesibini lineshawari, kwaye likufuphi negumbi lokulala lesibini, elinebhedi epheleleyo. Kukho umatrasi womoya kwi-master closet, kunye nebhedi eyongezelelweyo yayo.
4.96 ·Izimvo eziyi-142
4.96 · Izimvo eziyi-142
Ngommelwane omnye osondeleyo, indlu yethu yesango ivakala ngathi ukude ukusuka naphi na, xa ngenene uyimizuzu embalwa uqhuba okanye umgama wemizuzu emihlanu kuyo yonke into. Yonwabela indawo ezolileyo kunye nepholileyo kwindlu yasefama, ukonwabela iindawo zokutyela ezininzi ezisemgangathweni kunye neendawo zokutyela kanye edolophini okanye ngaphesheya komlambo, thatha uhambo oluya elunxwemeni okanye kwiipaki zaseRedwood, okanye ukonwabele ixesha lakho kwifama.
Njengefama esebenzayo sikwisiqingatha semayile phezulu kwindlela yefama enkulu sisenza imisebenzi yasekhaya kwaye sisebenza ngaphandle rhoqo kusasa nangokuhlwa. Sonke sisebenza ngaphandle kwefama, kodwa umntu uhlala esekhaya kwaye kulula ukuqhagamshelana naye imini yonke, yonke imihla.
Njengefama esebenzayo sikwisiqingatha semayile phezulu kwindlela yefama enkulu sisenza imisebenzi yasekhaya kwaye sisebenza ngaphandle rhoqo kusasa nangokuhlwa. Sonke sisebenza nga…